रुसले हिंजो घोषणा गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ‘ स्पुत्निक ५ ‘ को वास्तविकता के हो ? त्यो खोप बजारमा कहिले आउँछ ? उक्त खोपबारे बैज्ञानिकहरुले के भनेका छन् ? - Complete Nepali News Portal
रुसले हिंजो घोषणा गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ‘ स्पुत्निक ५ ‘ को वास्तविकता के हो ? त्यो खोप बजारमा कहिले आउँछ ? उक्त खोपबारे बैज्ञानिकहरुले के भनेका छन् ?
डा. रबिन्द्र पाण्डे : रुसले हिंजो घोषणा गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ‘ स्पुत्निक ५ ‘ को वास्तविकता के हो ? त्यो खोप बजारमा कहिले आउँछ ? उक्त खोपबारे बैज्ञानिकहरुले के भनेका छन् ?
रुसले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन विकास गरी अक्टोबर महिनामा सर्वसाधारणमा प्रयोगमा ल्याउने जनाइसकेको छ । उसले विभिन्न देशहरुमा भ्याक्सिनको माग भइसकेको जनाएको छ । अमेरिकाले र युरोपमा पनि भ्याक्सिनको विकास हुँदैछ । सम्भवत सन् २०२१ को शुरुमा भ्याक्सिन विकास गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ । चीनले सैनिक र स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भ्याक्सिनको प्रयोग शुरु गरिसकेको छ ।
धनी देशहरु अहिले नै भ्याक्सिन प्रयोग गरेर ढुक्कसाथ आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुने तयारीमा पुगिसकेका छन् । कोरोना भाइरसले समस्यामा पारेको नेपाल जस्तो देशहरुमा यस्तो तयारी देखिदैन । यसले कम्तिमा एक वर्ष आर्थिक गतिविधिमै समस्या पारिरहने खतरा बढेको छ ।